$ 9.4 milyan oo la siiyay 421 urur oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada guud ahaan gobolka Washington - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|$ 9.4 milyan oo la siiyay 421 urur oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada guud ahaan gobolka Washington
$ 9.4 milyan oo la siiyay 421 urur oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada guud ahaan gobolka Washington
Iskuulka Out Washington wuxuu lashaqeeyaa Ganacsiga si loo hirgaliyo Sanduuqa Taakulaynta Horumarinta Dhallinyarada
Cudurka 'COVID-19' ayaa dillaacay, xirnaanshaha iskuulka oo la dheereeyey, iyo kala fogaanshaha bulshada ayaa sii kordhiyey sinaan la'aanta iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku nool daafaha Washington. Jawaab ahaan, barnaamijyada horumarinta dhalinyarada si dhakhso leh ayey ula qabsadeen adeegyadooda si ay u siiyaan taakuleyn dhalinyarada iyo qoysaska ay aadka ugu xiran yihiin. Bixinta ama la waafajiyay bixinta waxaa ka mid ah daryeelka carruurta degdegga ah, taageerooyinka bulsho-shucuur, hagitaan tacliimeed, barnaamijyo hufan, iyo taageerooyinka baahiyaha aasaasiga ah. Qoysas badan, ururradan waxay u ahayeen nolol-socod joogto ah. Ayadoo la siinayo marin u helida adeegyada muhiimka ah iyo u hibeynta siinta fursadaha waxbarasho ee la balaadhiyey khadka tooska ah, waxay gacan ka geysteen hubinta in dhalinyarada ay nabad ahaadaan, ku hawlan yihiin lana taageeray.
Waaxda Ganacsiga ee Washington waxay abuurtay Sanduuqa Horumarinta Dhallinyarada Washington ee Sanduuqa Gargaarka ee aan macaash doonka ahayn oo lala kaashaday Iskuulka 'Out Out Washington' si loo hirgeliyo. Maalgelinta waxaa suurta galiyay Sharciga CARES (Coronavirus Aid, Relief, iyo Security Security Act). Maalgashigan hal mar ah wuxuu ka caawiyaa kuwa aan macaash doonka ahayn inay albaabadooda u furnaadaan oo ay maareeyaan caqabadaha barnaamij iyo dhaqaale ee ay ka mid yihiin dakhliga lumay iyo kordhinta kharashyada si loogu hoggaansamo tallaabooyinka amniga ee cusub.
Ilaa iyo intaan isugu nimid la dagaalanka COVID-19, wali waxaan haysanaa waddo dheer oo noo haray. Ururada aan macaash doonka aheyn ayaa gabi ahaanba muhiim u ah taageerida iyo kor u qaadida caruurta iyo dhalinyarada halista ugu jirta inay dib uga dhacaan ama la kulmaan saameynta jireed iyo shucuureed ee cudurkan faafa. Laakiin ururadeenna bulshada ma qaban karaan shaqadooda maalgelin la'aan. Waxaan si wadajir ah ugu jirnaa, deeqahaasi waa hal dariiqo oo aan gacan uga geysan karno sidii aan u xoojin lahayn bulshooyinkeenna, ”ayay tiri Lisa Brown, oo ah agaasimaha Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington.
$ 9.4 milyan ayaa la siiyay 421 ururada horumarinta dhalinyarada. Abaalmarinnada waxaa loo qaybiyey dhammaan qaybaha gobolka iyada oo diiradda la saarayo ururada u adeegaya mudnaanta dadka ee ay si aan kala sooc lahayn u saameeyeen COVID-19 (BIPOC, LGBTQ, muhaajiriinta / muhaajiriinta, dhalinyarada naafada ah iyo dhalinyarada faqriga, iyo kuwo kale). Abaalmarintu waxay u dhexeysaa $ 10,000 illaa $ 50,000 waxaana loo qaybin doonaa inta u dhexeysa bartamaha Nofeembar iyo Diseembar 15, 2020.
Ganacsigu wuxuu doortay inuu la shaqeeyo Iskuulka 'Out Washington' (SOWA) sababtoo ah khibradda goobta ee hay'adda, muraayadaha sinnaanta, khibradda deeq-bixinta, iyo awoodda lagu hoggaamin karo geeddi-socodka adag ee jadwalka caadiga ah ee aan caadiga ahayn. Nidaamkan waxaa loogu talagalay in lagu jabiyo caqabadaha hortaagan maalgalinta ururada aasaasiga ah ee ka jira guud ahaan gobolka kuwaas oo si toos ah u taageera dhalinyarada BIPOC, dhalinyarada saboolnimada ku nool, iyo dadka kale ee aadka u saameeya dhalinyarada.
RFP waxaa la siidaayey 23-kii Sebtember waxaana in ka badan 600 oo codsi la helay markii ugu dambaysay ee bisha Oktoobar 6. RFP waxaa loo tarjumay 13 luqadood. Kooxda shabakada u-adkeysiga ganacsiga Ganacsi waxay siisay caawimaad farsamo si ay u taageeraan codsadayaasha ka socda gobol kasta oo ka tirsan gobolka.
Dib-u-eegeyaasha asaaga ah ee ka socda bulshooyinka Washington oo dhan ayaa loo qorey inay akhriyaan oo ay dhaliyaan codsiyada.
112 dib u eegis ayaa laga soo xulay in ka badan 200 oo muujiyey xiisaha
55% ka mid ah dib-u-eegayaashaan ayaa loo aqoonsaday inay yihiin BIPOC
84% ayaa sheegay inay ku noolaayeen waaya-aragnimo / aqoonsiyo xiriir la leh dhalinyarada iyo dhallinyarada BIPOC ee saboolnimada ku nool
Qiyaastii darsin / dhalinyaro waaweyn ayaa ku hawlan dib-u-eegid ahaan
Dhammaan dib-u-eegeyaasha waxaa looga baahnaa inay kaqeybqaataan tababarka kahortaga eexda iyo inay baaraan qaabka dib u eegista arjiga, iyadoo la adeegsanayo rubric scorer
Kooxo yar yar oo ka mid ah dib-u-eegeyaasha asaaga ah ayaa kulmay si ay uga doodaan oo u dhaliyaan codsiyada una siiyaan jawaab-celin Dugsiga Ka-baxsan Washington. Marka lagu daro dib-u-eegista talooyinka kooxaha, SOWA waxay sidoo kale tixgelisay matalaad loo siman yahay oo ku saabsan dadweynaha saamaynta aan saamaynta ku lahayn ee ku baahsan gobolka oo dhan, iyo sinnaan juquraafi ahaan loo qaybiyo. Go'aammada ugu dambeeya waxaa la qaatay iyadoo lala kaashanayo Ganacsiga.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahaado wacyigalinta iyo dib u eegista Sanduuqa Gargaarka ee Dugsiga Dibedda ee Washington. Waxaan aad ula dhacay sida loo wada dhan yahay howsha oo aan u bogay in dhalinyaro lagu daro dib u eegista deeqaha. SOWA waxay gaartey oo abaalmarin siisey ururo kaladuwan oo gobolka oo dhan ah kuwaas oo u adeega dhalinyarada inta ugu fog cadaalada waxbarashada, ”ayuu yiri Luis Gomez, Sarkaalka Barnaamijka, Kaqeybgalka Bulshada iyo Hogaaminta Dhalinyarada, Yakima Valley Community Foundation.
Celcelis ahaan, 88% dhalinyarada ay u adeegaan abaalmarinaha waxay ku jiraan Sanduuqa Relief ee dadka saamaynta ay ku yeelatay saamiga (oo ay ku jiraan BIPOC, LGBTQ, soogalootiga / soo galootiga, dhalinyarada la kulmaya hoy la'aanta iyo dhalinyarada faqriga). 48% ururadu waxay soo sheegeen in dhamaan dhalinyarada ay u adeegaan ay ka mid yihiin dadka ay saamaynta ku yeelatay saamiga.
"Intii lagu jiray waqtigan aan horay loo arag ee hubin la'aanta dhaqaale, kacdoon bulsheed iyo sinaan la'aanta sii kordheysa, ururada helay lacagtaan waxay mareen caqabado waa weyn si ay u bixiyaan taageero wax ku ool ah iyo isku xirnaanta carruurta iyo dhalinyarada markay aad ugu baahdaan. Dugsiga 'Out's Washington' wuxuu u heellan yahay taageerida iyo u ololeynta shaqada bixiyeyaasha horumarinta dhallinyarada. Laakiin waxay ahayd ururradan-xilligan-in ay si cad u muujiyeen doorkooda lama huraanka ah ee nidaamka deegaanka ee taageerada dhalinyarada ee gobolkeenna. Waxaan rajeyneynaa in qulqulkaan dhaqaale ay ka caawineyso iyaga inay ilaashadaan, soo kabtaan oo ugu dambeyn ay barwaaqoobaan, ”ayey tiri Elizabeth Whitford, oo ah agaasimaha guud ee Iskuulka Out Washington.
Liiska buuxa ee abaalmarinaha iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan geeddi-socodka ayaa laga heli karaa halkan.
Isgaarsiinta Ganacsiga, (206) 256-6106 | Moobayl / qoraal: (360) 704-9489
Isgaarsiinta Dibedda ee Washington
← Ka caawi dadka inay dalbadaan lacag-siintooda kicinta Qalabka falanqaynta degdegga ah ee 'Excel' →